India: Miaro ny fahalalahana miteny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Novambra 2018 2:44 GMT
Niraondraona nandritra ny faran'ny herinandro ny tontolon'ny bilaogy Indiana tamin'ireo lahatsoratra sy fanehoan-kevitra manodidina ny ivontoeram-pampianarana iray izay nampiady hevitra. Nandefasan'ity ivontoerana ity mailaka ny Vintage Point, bilaogy iray tantanan'i Gaurav Sabnis, mba hanaisotra ny lahatsoratra rehetra izay nanontany (nitsipaka) ny filazan'ny ivontoerana. Ny lahatsoratra tany am-boalohany izay nanome aingam-panahy ireo lahatsoratra tao amin'ny bilaogy dia azo vakiana ao amin'ny JAM Magazine ato. Rashmi Bansal, ao amin'ny Youth Curry, no iray tamin'ireo hery mitarika ity gazetiboky ity lasibatra tamin'ny fanehoan-kevitra ankamelimely sy tsy nitonona anarana. Bilaogy maro anisan'izany ny Sambhar Mafia sy Desi Pundit no nanaraka akaiky ny fivoaran-draharaha .
Bilaogy Indiana maro no namerina izany antso ho fanohanana izany. Ny vaovao farany dia ny hoe niala tamin'ny asany tao amin'ny IBM i Gaurav Sabnis. Hoy izy -
Tao anatin'io lahatsoratra io ihany, nanolotra ny fanehoan-kevitra matanjaka ho an'ny lahatsorany teo aloha izy sy ny antony ijoroany amin'ny zavatra nolazainy tao amin'ny bilaoginy -